U Gaar Ah Iftineducation:Ninkaada Libaax Kama Adkee Ka Dhigo Rabaayad ! Sir Ayaa Lagu Hayaa - iftineducation.com
iftineducation.com – Haween badan ayaa ku jahwareersan sidii ay isu jecelsiin lahayeen ragooda Taasina waxaa sabab u ah iyaga oo aan dhab u aqoonsan halka ninka ay ka soo marayaan wadooyinka ugu sahlan ee qalbigiisa ku degi karaan .
Haweenka diinta ku yar ayaa maciin bida wadooyin qaldan sida sixirka iyo waxii la mid ah ,Gabaryahey Ogaw ninkaada Libaaxa kama ad-adka ee ka dhigo rabayaad aan wax ka diideyn isna jecelsii.
Hadaba qisadaan si wacan u dhuux kana tusaale qaado.
Haweeney ayaa u tagtay nin wadaad ah iyada oo u qaadatay in uu sixiroole yahay ,waxa ayna ka codsatay in uu u sameeyo sixir si ninkeeda ugu jeclaado si aan haweeney loo jeclaan.
Wadaadkii ayaa u sheegay naagtii in ay dooneyso arin sahal aheyn in ay diyaar u tahay in qarashka ku baxaya la baxeyso ,waxa ay tiri haa waan la baxayaa.
Wadaadkii ayaa u sheegay in arintan la sameyn karin iyadoo aan la helin tinta qoorta libaaxa ,waxa ay tiri libaax ,haa , xal kale malaha miyaa libaax la iskuma aamini karee .
Maya Maya arinta aad rabto in ninka lagugu jecleesiiyo tinta qoorta libaaxa ayay ku xeran tahay hadaad keento ujeedkaada waad gaareysa.
Haweeneysa oo dhabanada haysata ayaa soo baxday waxa ayna durba la tashatay qof ay ku kalsooneyd taasi oo u sheegtay in libaaxu wax ugaarsan haddii uusan baahneyn haddii ay dharjisana shartiisa ka nabad galeyso.
Naagtii ayaa bilaawday in ay duurka aado isla markaana hilib u tuurto libaaxii maalin waliba ilaa uu ka bartay.
Markii dambe ayay bilaawday in ay u dhawaato ka dibna sidii ay arintas u waday waxa ay ku guuleysatay in madaxa ka salaaxo iyadoo ugu dambeyntii qoortiisa ka jartay tintii loo soo diray.
Wadaadkii ayay ula tagtay tintii uu u diray,waxa uu weydiiyay sida ay ku heshay ,iyadoo uga sheekeysay wadooyinkii ay martay.
Wadaadkii oo yaabay ayaa ugu jawaabay gabaryahey ninkaada Libaax kama sharbadnee la macaamil ninkaada oo dharji .
Aqriste waan filayaa in xikmada ku jirta sheekaadaan aad wada fahamteen .
Sidee Ku Kasbankartaa Qalbiga Xaaskaada Fadlan Aqriso Warbixintan.